Uyemukelwa Ezindaweni Zokuhlala ZakwaSoleil, enye yezindawo zokuhlala zase-Jamaica ezikhetheke kakhulu neziwubukhazikhazi obuseceleni kolwandle okuhlanganisa ukuhlala okunethezekile okunezindawo zokungcebeleka zezinkanyezi ezinhlanu. Le condominium entsha yegumbi elilodwa inompheme omuhle othatha ukubukwa okumangalisayo kwe-180 degree Bay. Izivakashi ziphinde zibe nokufinyelela okuthokomele ku-Beach Club okuyindawo nje eseduze.
Isakhiwo senza isitatimende esihlaba umxhwele somklamo wobuciko ngendawo engasemanzini njengesikhuthazo sakho konke ukukhetha kwaso. Izinsiza zokunethezeka zihlanganisa
Ukuphepha okuhlanganisiwe, amahora angama-24 kunikeza umuzwa ovikelekile ophilayo.
I-Soleil inesikhungo sokufaneleka sesimanje esibheke ulwandle.
Ichibi langaphandle elinamajethi omzimba
I-Outdoor Lounge Pavilion
Inkundla yokudlala yezingane
I-Elevated Beach Park
I-Manicured Trpical Grounds
Ikhishi Lokuhlanganyela Langaphandle kanye Nendawo Ye-BBQ
Yenza isipele Ukuhlinzekwa Kwamanzi
Singahlela endaweni yokwelashwa kwe-spa.
Isikhala ngokwaso siqedwe kahle futhi sinazo zonke izinsiza ezilindelwe kufaka phakathi:
- Uhlelo oluvulekile olugcwele indawo yokuhlala nendawo yokudlela enokubukwa okumangalisayo
- I-Balcony yangasese enokubukwa okumangalisayo kwe-180 degree ebheke i-Bay.
- Ikhishi elikhulu elihlome ngokuphelele, izinto zokubala zequartz, ompompi baseGrohe, isiqhingi esikhulu esinezihlalo, izinto zikanokusho.
- Kubathandi bekhofi sinomshini wekhofi we-Filter.
- 2 Smart TV's (Igumbi lokuhlala negumbi lokulala)
- Abalandeli be-Ceiling kuwo wonke amagumbi kanye ne-balcony
- Inqwaba yokukhanya kwemvelo
-Ubhasikidi wamukelekile - izinto ezimbalwa nje zokwenza ukuhlala kwakho unethezekile njengetiye, ikhofi, ubisi, ushukela kanye nezinsiza zokugezela eziphilayo.
Ezinye izinto ezimbalwa esicabange ukuthi ungathanda ukuzazi ngokunethezeka kwakho okwengeziwe...
-I-Premium bed linen futhi ngaphansi kwayo yonke into, umatilasi nemicamelo kufakwe ngokugcwele izembozo zokuzivikela.
-Amathawula akho nawo ayawashwa, noma ngabe abengasetshenziswanga yisivakashi sangaphambilini njengoba sifuna ukuthi yonke into oyisebenzisayo ibe fresh...
-Izindlu zakho zangasese, amashawa kanye nosinki kuyahlanzwa futhi kuyahlanzwa. Wonke amasofa nezihlalo ziyahlanzwa ngaphambi kokufika kwakho
- Nakuba singeke sikwazi ukuwasha yonke into, ibhodwe, ipani, ipuleti, inkomishi, isitsha nocezu lwesiliva phakathi kwesivakashi ngasinye, siyakugeza lokho okushiywe ngaphandle...
-Sinakekela kakhulu futhi siyaziqhenya ngokuhlanzeka kwefulethi lethu lapho ufika ngoba sifuna uzizwe sengathi niyizivakashi zethu zokuqala!
Ukuze ube nokuthula kwengqondo, le ndawo isendaweni yomphakathi enamasango aphakeme ngokuphepha amahora angama-24, indawo yaseFreeport iphephe kakhulu.
Ifulethi lizibambele mathupha ngomnyango wangasese.
Isikhathi sokungena singemva kuka-2pm.
I-Apartment inekhiphedi futhi sizokuthumelela imininingwane yekhodi yakho yomnyango ngaphambi kokufika. Kunconywa futhi ukuthi ufike emini ngosuku lokuqala ukuze ukwazi ukujwayela indawo.
Itholakala endaweni efiselekayo yaseFreeport eMontego Bay, iSoleil iyisiqongo sezindawo zokuhlala ezihlala esiqhingini saseJamaica.
Ukujula nje ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Sangster International (cishe imizuzu engu-20), izihambeli zase-Soleil zikwazi ukufinyelela kalula amabhishi esihlabathi esiyimpushana esimhlophe, inhlobonhlobo yezitolo, amabhange kanye nokudla ezindaweni ezinhle kakhulu e-Montego Bay. Phefumula kalula ukudlala igalofu emoyeni ohelezayo ngokukhetha kwakho izifundo zegalofu ezisezingeni lomhlaba ezi-3 phakathi nemizuzu nje yaseFreeport. I-Soleil itholakala kalula phakathi kwebanga lokuhamba lezindawo zokudlela ezimbili; i-Montego Bay Yacht Club kanye ne-Houseboat Restaurant. Abahlali baseSoleil baphinde banikezwa ilungelo lobulungu be-Beach Club. Njengesivakashi sase-Soleil, udinga kuphela ukuphakamisa amehlo akho ukuze ubuke ukubukwa okungaphazamiseki koLwandle lwe-Caribbean. Zilahlekele ku-waterfront vistas kanye nezwe eliluhlaza, i-Soleil izoba yindawo yakho engcwele. Uzozizwa usekhaya ngaphakathi kwe-Apartment ebekwe kahle.
Sizokunikeza ubumfihlo bakho, nokho, wamukelekile njalo ukusithinta uma unemibuzo noma ukukhathazeka. Sicela ukhululeke ukusishayela.